पोउवासंघको चुनावी मैदानमा सोवित पौडेल, देखे सुन्दर सपना – Gandaki Voice
Home/गण्डकी/पोउवासंघको चुनावी मैदानमा सोवित पौडेल, देखे सुन्दर सपना
पौडेल कस्ता उम्मेदवार ?
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव आउन अब ६ दिन मात्रै बाँकी छ । शनिबार उम्मेदवारी मनोनयन भएसंगै पोखराका उद्योगी व्यवसायीलाई चुनावले छोएको छ । उम्मेदवारहरुले मतदातासंग भेटघाट र फोन सम्पर्कमार्फत छलफललाई तीव्र बनाएका छन् ।
मतदातासंगको भेटमा उम्मेदवारहरुले संघमार्फत उद्योगी व्यवसायीको हितमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने राय मागेका छन् । उम्मेदवारसंग मतदाता उद्योगी व्यवसायीले पनि खुलेरै कुरा गरेका छन् । उनीहरुले उम्मेदवारसंग विभिन्न समस्या सुनाएका छन् ।
संघकी मतदाता तथा पोखरा पर्स्याङकी एक किराना व्यवसायी सीता गौतमले उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार सोवित पौडेलसंग व्यवसायीका समस्या खुलेर राखिन् । उनले चुनावमा भोट मात्रै माग्न आएको र पछि फर्किएर धन्यवाद भन्नसमेत कोही नआएको उम्मेदवार पौडेलसंग दुःखेसो पोखिन् ।
गौतमले चुनावमा भोट माग्न आएका उम्मेदवारले जितेपछि अनि एकै चोटी सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्यो भनेर फोन गरेको गुनासो गरिन् ।
गौतमले भनिन्, ‘घर भाडाको समस्या निकै जटिल छ । करको कुरा पनि बुझिनसक्नु छ । यत्रो कोरोना महामारी भयो, लकडाउन भयो तर कसैले कस्तो छ ? भनेर सोध्न आएनन् ।’
जवाफमा उम्मेदवार व्यवसायीका पीडा निकै गम्भीर रहेको भन्दै अबका दिनमा संवोधन गर्ने गरी अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले आफू सधैं उद्योगी व्यवसायीको साथमै रहेर काम गर्ने स्पष्ट पारे ।
यस्तै गुनासो सुन्दै र मतदाता समक्ष आफ्नो प्रतिवद्धता जनाउँदै चुनावी मैदानमा होमिएका उम्मेदवार पौडेलले संघलाई नमूना संस्था बनाएर अघि बढाउने लक्ष्य राखेका छन् ।
एक कार्यकाल संघको सदस्य भएर काम गरिसकेका पौडेलले संघलाई बलियो बनाउने र उद्योगी व्यवसायीको पिर मर्कामा सिंगो संघलाई एकसाथ अघि बढाउने सोंचमा छन् । यति गर्न सकिए उद्योगी व्यवसायीलाई संघ भएको महसूस गराउन सकिने पौडेलको विश्वास छ ।
डेढ दशकदेखि पोखरामा रहेर हस्पिटालिटी क्षेत्रमा काम गरेका उनी डाँफे होटल ट्रेनिङ एण्ड ल्याङ्ग्वेज एकेडेमीका सञ्चालक हुन् । उनी लायन्स क्लव, जेसीजका साथै विभिन्न संघसंस्थामा सफल नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् ।
संघद्धारा आयोजित औद्योगिक व्यापार मेलाको सांस्कृतिक समितिको संयोजक भएर पनि पौडेलले आफ्नो दरिलो क्षमता प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।लायन्स क्लव अफ पोखरा हेरिटेजको संस्थापक अध्यक्ष भएर उनले महत्वपूर्ण छाप छोड्न सफल भएका छन् ।
लायन्स क्लव इन्टरनेशनल डिष्ट्रिक्ट ३२५ बी १ नेपालका वर्तमान फस्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर विश्वेश्वर आचार्य उम्मेदवार पौडेल एक जुझारु युवा लिडर भएको बताउँछन् । आचार्य भन्छन्, ‘उहाँ एक सफल र जुझारु युवा हो । उहाँ लायन्स क्लवको अध्यक्ष रहँदा निकै महत्वपूर्ण काम गर्नुभयो । साथै व्यवसायिक हिसावले पनि पौडेल सर सफल व्यक्तित्व हो ।’ केही गरौं र केही गरिरहनुपर्छ भन्ने उत्सुक भावना पौडेलमा रहेको भन्दै आचार्यले यस्तो भावना जो कोहीमा हुन नसक्ने बताए ।
उम्मेदवार पौडेललाई केहीले सरल र मृदुभाषी व्यक्तित्वका रुपमा पनि चिनाउँछन् । उम्मेदवार पौडेलका मित्र एवं पोखरा न्यूरोडस्थित वेवी कर्नरका सञ्चालक विनोद ढुंगाना भन्छन्, ‘सोवित सर जे काममा हात हाल्नु हुन्छ, त्यो काम नसकि विश्राम लिनुहुन्न ।’
‘बोलेका कुरा पूरा गरेरै छाड्ने उहाँको बानी मलाई असाध्यै मन पर्छ । उहाँमा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता उहाँमा छ’, लायन्सका पूर्व क्याविनेट सेक्रेटरीसमेत रहेका ढुंगाना भन्छन् ।
संघको सिंगो टिम एकतावद्ध भएर लाग्न सकेमात्र उद्योगी व्यवसायीका समस्या सुल्झाउन सकिने उनको विश्वास छ । ‘उद्योगी व्यवसायीका समस्या बग्रेल्ती छन् । ति समस्या एउटा व्यक्तिले चाहेर समाधान हुन सक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘यसका लागि सामूहिक प्रयास र प्रतिवद्धताको खाँचो छ ।’
पोखराको विकास निर्माणका सवालमा पनि संघले विगतमा जस्तै दरिलो उपस्थिति जनाउन आवश्यक रहेको भन्दै पौडेलले यसका लागि आफू सक्रिय भएर लाग्ने स्पष्ट पारे । पोउवासंघलाई विगतमा जस्तै पोखराको प्रत्येक सवालमा प्रभावशाली संस्था बनाउने उनले सुन्दर सपना खेलेका छन् ।
पौडेलले स्वतन्त्र प्यानलबाट वाणिज्य उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । उनको प्यानलबाट अध्यक्षमा विन्दु कोइराला सुवेदीले उम्मेदवारी दिएकी छन् ।
यस्तै महासचिवमा धनीराम बराल, कोषाध्यमा तारानाथ ढुंगाना, उपमहासचिवमा धर्मराज वर्तौला र सदस्यहरुमा पवित्रादेवी गुरुङ, विनोद केसी, रामप्रसाद गौतम र उत्तम सेवक कार्कीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।